Gbasara gị | Relọ Nkwụghachi ,gwọ, Lovehụnanya, Mmekọahụ na Internetntanetị
Home Gbasara gị
Gbasara gị Ezubere iji nyere gị aka ịchọta ihe mgbakwunye maka mkpa gị dị ka onye ọrụ, nne na nna, onye mmekọ, ọkachamara ma ọ bụ nwee mmasị. Ọ ga-arụ ọrụ maka izu ole na ole sochirinụ ka ịtinye ụdị ọhụụ.
Na Nkwụghachi Foundationgwọ Ọrụ anyị na-elekwasị anya karịchaa n'ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ ịntanetị. Anyị na-elele nsonaazụ ya na ahụike uche na nke anụ ahụ, mmekọrịta, inweta na mmebi iwu. Ebumnuche anyị bụ ime ka nyocha nke ndị na-abụghị ndị ọkà mmụta sayensị nwee ike ịnweta nyocha ahụ ka onye ọ bụla wee nwee ike ịchọta nhọrọ ọmụma banyere iji ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ ịntanetị. Anyị na-elele uru dị n'ịkwụsị porn na-adabere na nyocha na akụkọ nke ndị nwalere iji kwụsị ya. Anyị na-enye nduzi maka iwulite nrụgide na ihe riri ahụ.
Wardlọ Ọrụ Relọ Ahịa agbakwunyere ọrụ ya na nkọwapụta ahụike World Health Organisation gbasara ahụike mmekọahụ:
Ebe nrụọrụ anyị egosighi ihe ọ bụla na-akpali agụụ mmekọahụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ anyị mepụta ibe maka otu ọzọ, biko gwa anyị ka anyị jiri mpempe kọntaktị dị n'okpuru.
Si ebe a ị nwere ike ejikọta peeji nke na…
Ego maka ndị erughi afọ iri na abụọ
Ihe eji enyere umuaka aka